နားမလည်ဘူး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Poetry » နားမလည်ဘူး	14
Posted by တောတွင်းပျော် on Aug 12, 2015 in Poetry | 14 comments
ခင်ဗျား လက်ဆော့ ခဲ တဲ့့
အကြိမ်ကြိမ် နေဝင်ခဲ့ တာ
အောင် မိုးသူ says: အဲ့ဒါ ပြောင်စပ်စပ်လား
Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 393
တောတွင်းပျော် says: စပ်အောင်ရေးကြည့် ထားတာ
Alinsett @ Maung Thura says: အိပ်မက်က လှတယ်
တကယ်တမ်း ပြောရရင် ဒီကဗျာလေး တအား သဘောကျ
တောတွင်းပျော် says: အိပ်ချင်မူးတူးထ
ကော်မန့််ဝင်ပေးလိုက်တာကို
Mike says: .နားမလည်ဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 393
တောတွင်းပျော် says: နားမလည်တာကို နားလည်သလိုလိုနဲ့ 
နားမလည်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာကိုလည်း
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .ကောင်းလိုက်တဲ့ ကဗျာ။
တောတွင်းပျော် says: ရေးတတ်သလိုသာ ရေးလိုက်တဲ့ 
ကဗျာလေးကို ကောင်းလိုက်တာဆိုလို့ 
ဇီဇီခင်ဇော် says: ပီကာဆိုရဲ့ ကောက်ကြောင်းတွေကို နားမလည်ကြောင်း ရေးထားတဲ့ ကဗျာကိုနားလည်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ ဝါဆိုမိုးဥ ရဲ့ ကောက်ကြောင်းကိုရော နားလည်လားဟမ်??
တောတွင်းပျော် says: နားမလည်တာကို နားလည်ပေးတဲ့ 
မမချွိကို နားလည်ချင်သလိုလိုနဲ့ 
ဒါနဲ့နားမလည်လို့ 
Ma Ma says: ဖတ်ပြီးစက နားမလည်ဘူး။
နားမလည်တာကို နားလည်အောင် ပြန်ဖတ်ရင်းနဲ့
နားမလည်တော့ဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: စဉ်းစားလို့ မရဘူးဗျာ ။ မိုးမလင်းဘဲ ​နေ​တွေအကြိမ်​ကြိမ်​၀င်​တယ်​ဆိုတာကို ။ သဘာဝကိုလွန်​ဆန်​​နေသလိုဂျီးဖြစ်​မ​နေဘူးလား ။ ​နေက အ​ရှေ့ကထွက်​မလာဘဲ အ​နောက်​အရပ်​ဆီသို့ အကြိမ်​ကြိမ်​၀င်​၏ ။ ဆိုရင်​ …………..
…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 11642
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: ပီကာဆိုဘ၀ ငါလေရ ချင်ရဲ့ လို့ ဆိုခဲ့တဲ့သူတွေကို သွားမေးကြည့်ရင်
HMM says: နားလည်တာကို နားမလည်ချင်ယောင်ဆောင်တဲ့သူ နဲ့
နားမလည်တာကို နားလည်ချင်ယောင်ဆောင်တဲ့သူတွေကို နားမလည်ချင်ဘူး…